Beel ka soo jeeda Gobolada Waqooyi oo Qaadacay Doorashooyinka Aqaka Sare – STAR FM SOMALIA
Beel ka soo jeeda Gobolada Waqooyi oo Qaadacay Doorashooyinka Aqaka Sare
Kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka, aqoonyahanada dhalinyarada Beesha Akishe ee ka soo jeeda Gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa waxaa ay kaga cabanayeen sida lagu baalmarinayo kuraasta ay ku leeyihiin kuraasta aqalka sare oo ay sheegeen in lagula tar tarsiinaayo beesha ugu kuraasta badan beelaha waqooyi.
Cabashadooda ayaa waxay ku saleeyeen in la baal maray go’aano horay loo soo saaray iyo qoraal ka soo baxay Xafiiska Guddoonka Baarlamaanka, taasoo ku cadeyd in beelaha Aqalka hoose aan waxba ku lahayn, ay xubno ku heli doonaan Aqalka Sare, iyadoo sheegay in aysan cadaalad aheyn taas in Aqalka sare lagu tartan siiyo beelo kuraasta ugu badan ka helay Aqalka Hoose.
Suldaanka Beesha ayaa sheegay in ay ka mid yihiin dadka daga gobolada woqooyi xiligaana ay u soo jeesteen sidii ay geed dheer iyo geed gaabanba ugu fuuli lahaayeen sidii loo heli lahaa xuquuqda ka maqan beesha.
Sidoo kale isla goobta waxaa ka hadlay Maxamed Sheekh Ibraahim oo ah musharax u taagan qabashada xilka aqalka sare waxaa uu isna dhankiisa sheegay in ay ku qanci karaan oo kaliya in ay Beesha Akishe kuraastooda iyaga dhexdooda ay ku tartamaan.
Sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay siyaasiga Maxamed Axmed Cali iyo Jeneraal Sanka Xaaji, waxaa ay isku raaceen in aysan marnaba aqbali doonin in kursigaas ay kula tartamaan beel kale.
Ugu dambeyn waxaa ay soo saareen baaq ku saabsan in la tixgeliyo cabashadooda oo aan marnaba la duudsiin xaqa ay ku lahaayeen kuraasta Aqalka Sare.
Barakac saaka ka bilowday deegaanka Bariire ee Gobolka Shabellaha hoose
Ciidamadii Puntland ee ku sii jeeday Qandalla oo lagala hor yimid qaraxyo iyo dagaalo